Qarax ismiidamin ah oo caawa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaQarax ismiidamin ah oo caawa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay
Hiiraan Xog, Laba Qarax oo is xig xigtay ayaa maqribnimadan caawa ah waxa ay ka dhaceen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, sida ay Warbaahinta u sheegeen dad goobjogayaal ah.
Qaraxyadan oo daqiiqada un kala horeeyay ayaa midka hore wuxuu ahaa bambo gacmeed lagu weeraray hotel la yiraahdo Bilan, halka midka kalena nin isku soo xiray jaakad qarax ku xiran yahay uu ku weeraray maqaaxida Beder.
Ilaa hadda khasaaraha dhabta ah lama xaqiijin karo, goobta ay qaraxyada ka dhaceen waxaa si deg deg ah ku gaaray gaadiidka gurmadka ee ambalaasta, si ay halkaasi uga soo qaadaan dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi.
Dadka ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay dhinteen Afar ruux,halka tira kale ku dhawacmeen Qaraxa ka dhacay Hotel Bilan, kuwaasi oo dhammaantood ahaa shacab.
Masuuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan u gurmashada dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadan, dibna ay ka faah faahin doonaan khasaaraha weeraradan.
Qaraxyadan waxay ku soo aadeen xilli galabta magaalada Baydhabo kulan taageero ah ku qabsanayay musharax madaxweyne Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Qaraxyadan ayaa muujinaya heerka amni ee magaalada Baydhabo iyada lagu guda jiro abaabulka iyo diyaar garowga ku aadan doorashada la qorsheeyay inay dhacdo 17-ka November ee sanadkan.